Manambara ny amin’io fiverenan’i Jesoa Kristy io ny Baiboly. I Jesoa Izy tenany mihitsy koa no efa nampanantena ny mpianany hoe : “Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa” (Jaona 14.3).
“Fa ny tenan’ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin’ny fiantsoana sy ny feon’ny arikanjeky ary ny trompetran’Andriamanitra, ka izay maty ao amin’i Kristy no hitsangana aloha ; ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin’ny rahona hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka : dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika” (1 Tesaloniana 4.16-17)
Ny andinin-tSoratra Masina iray hafa dia manoritra fa mandritra ny indray mipi-maso monja no hisehoan’izany rehetra izany. Koa dia tsy hanam-potoana hiverenana amin’Andriamanitra ireo izay naniasia (1 Korintiana 15.52).
Tsy misy daty na fe-potoana voatondro mazava hitrangan’izany zavatra izany. Natao izany mba hamelombelomana ny fitiavan’ny kristiana, mba handrisika azy ireo hiandry ny Tompo mandrakariva. Jesoa rahateo koa dia tsy mitsahatra ny mamerimberina ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy hoe: “Ho avy faingana Aho” (3.11; 22.7, 12, 20).
· Manasaraka ny kristiana amin’izao tontolo izao ny fiandrasany ny Tompo; io no mahatonga azy ho toy ny vahiny etỳ ambonin’ny tany. Tsy maintsy mivonona mandrakariva ny handeha izy. Tsy maintsy azon’ny Tompony ankasitrahina izay ataony sy izay lazainy, rehefa hiverina Izy: asa natao tamim-pitandremana fatratra, trosa tsy nisy tsy voaloa, fandalàna hatrany ny fihavanana teo anivon’ny mpiara-belona... Tena manamasina ny kristiana mihitsy ity fampanantenana ity: “Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy” (1 Jaona 3.3).
· Mampionona ny kristiana ny fiandrasany ny Tompo, raha misy nodimandry ireo mpino namany; mampahery azy ao anatin’ny aretina, ny fanenjehana, ary amin’ny fiatrehana ireo fizahàn-toetra samihafa.
· Ny fiandrasan’ny kristiana ny Tompo dia manetsika azy hampitandrina, dieny mbola tsy tara loatra, ireo izay tsy mahazo antoka ny famonjena.
Editeur : BPC- La bonne semence. France Réf. SV020 MA
Hiverina tsy ho ela
ny Tompo Jesoa